OSX: Habee Daaqaddaada Terminalka | Martech Zone
OSX: Habee Daaqada Terminal-kaaga
Axad, Janaayo 21, 2007 Talaado, September 16, 2014 Douglas Karr
Inbadan oo idinka mid ah way ogyihiin inaan ahay xoogaa Mac cusub ah. Mid ka mid ah waxyaabaha aan ku raaxeysto OSX waa dabacsanaanta muuqaalka iyo dareenka is-dhexgalka. Tilmaamahan gaarka ah ayaa runtii u muuqda mid daciif ah, laakiin waan jeclahay. Waxaan marwalba u habeyn jiray daaqadaha amarka daaqada Microsoft Windows markasta oo aan isticmaalayo… laakiin xulashooyinka ayaa xadidanaa.
Terminal, waxaan ku cadeyn karaa isticmaalka nooc kasta oo font ah, balaca astaamaha, dhererka safka, cabbirka font, midabka font, hooska, sooyaalka, astaan ​​la'aanta asalka ah, calaamadee la isticmaalay… wow! Ka hadal qaadashada daaqad qolof ah oo ka dhig mid u eg niif. (Hagaag, waan ogahay… Waxaan ahay geeber uber). Laakiin tani uma muuqato mid quruxsan?
Haddii aad tahay OSX cusub sidoo kale, way fududahay:
Ka fur Furaha Terminal-kaaga galka codsiyadaada ama dekedda.
Tag liiskaaga Terminal-ka oo xulo Settings Window.
Samee wax ka beddelka aad jeclaan lahayd.
Muhiim: Tag galkaaga Faylka oo Guji Isticmaal Deji ahaan ahaan Dejin ahaan
Marka xigta ee aad Terminal ku furto toobiyea, waxaad heli doontaa isla daaqad qabow oo aad ku furto. Hadda haddaan ogaan lahaa waxa meesha lagu qoro…. 🙂
Wax ka baro Qorraxda iyo Jonathon Shwartz ee Wareysigan weyn
WordPress 2.1 waa kan… Hmmmm
Jan 21, 2007 saacadu markay ahayd 1:33 PM
Anigu waxaan ahay wax yar oo ka mid ah Mac newbie naftayda Doug, waad ku mahadsan tahay macluumaadka. Waan jeclahay muuqaalka daaqada Terminal-semi-transparent!